Web Scrabble Content: Izany no fomba tsara indrindra hahazoana data avy amin'ny tranonkala? - Manome ny valiny ny Semalt
Ny fahazoana angona avy amin'ny Internet dia tsy mora foana. Azonao atao ny manandrana ny zava-drehetra mba hitadiavana tranonkala iray ahitana ny angona tianao saingy tsy afaka maka na mamaky na mametaka ny votoatiny. Aza kivy anefa! Misy fomba sasantsasany ahafahana maka ny angona azo ampiasaina amin'ny format iray azo ampiasaina amin'ny fanodinana fanampiny:
Afaka mahazo angona avy amin'ny API (API). Betsaka amin'ny rindrambaiko toy ny Facebook sy Twitter no manome sehatr'asa ahafahana miditra mora foana amin'ny data. Mora ny mahazo tombontsoa ara-barotra ary na dia ny governemanta mampiasa izany interface izany aza.
Azonao atao koa ny mamoaka ny angona avy amin'ny PDF. Na izany aza, mety tsy mora izany satria PDF dia format manan-kery ho an'ny mpanonta. Misy ny vintana mety hamoy ny rafitry ny angon-drakitra ilaina rehefa mivoaka amin'ny PDF.
Misy fomba iray ahafahana manaisotra ny angona anaty tranonkala - fanangonana angon-drakitra amin'ny fampiasana tranokala votoaty .
Nahoana no hampiasana fanala vetaveta amin'ny tranonkala?
Raha jerena ny toetra manova ny votoaty hita ety anaty aterineto sy ny fahasarotan'ny tranonkala mifototra amin'ny tranokala, dia misy antony lehibe tokony handinihanao ny fampiasana tranokala iray mba hahazoana ny vaovao ilainao. Ity misy fijery fohy momba ireo antony ireo:
Fanakanana tranonkala iray tsy misy fanondroana
Ny fetra voafetra dia lafiny iray tokony hodinihinao rehefa mifidy fomba iray ahazoana data avy amin'ny harato. Amin'ny fampiharana, midika izany ny fametrahana voafetra ny isan'ny fotoana ahafahan'ny mpitsidika mahazo toerana iray izay tsy heverina ho DDoS (fandavana ny fandàvana ny serivisy. ). Raha te-hahazo ny ankamaroan'ny traikefa momba ny angon-drakitra ianao, dia ampiasao amin'ny varo-bary . Ny ankamaroan'ny tranokalan-tserasera dia tsy miaro ny votoatiny amin'ny fanoratana mba hahafahanao mahazo ny vaovao ilaina tsy misy olana.
Mijanòna anarana tsy mitonona anarana rehefa manodina
Raha te-hahazoana data avy amin'ny tranonkala manokana ianao, ny fanasitranana ny tranonkala no fomba tsara indrindra handehanana amin'io. Ny votoatin'ny tranonkala dia mamela anao hanao fangatahana HTTP tsotra nefa tsy misoratra anarana. Ankoatra ny cookie sy ny adiresy IP, dia tsy misy zavatra hafa afaka mitondra mpitantana site ho anao.
Ny fanariana tranokala dia manome anao angona azo alaina mora foana
Tsy fanasitranana ny tranokala. Tsy ilaina ny mifandray amin'ny olona ao amin'ny fikambanana na miandry tranonkala iray hanokatra API. Tsindrio fotsiny ny modely fototra momba ny fidirana sy ny votoatin'ny tranonkalanao ao amin'ny tranonkalanao dia hanao ny sisa amin'ny asa.
Azonao atao ny manamboatra tranokala amin'ny tranonkala mba hahazoana tarehimarika isan-karazany avy amin'ny tranonkala. Izany no fomba tsara indrindra ahazoana ny angona avy amin'ny tranonkala raha ampitahaina amin'ireo teknolojia fanodinana hafa. Ny fotoana manaraka dia te-hahazo ny angona avy ao amin'ny tranonkala ianao, ampiasao ny votoatin-tranonkalan'ny vohikala ary ny asa dia ho mora kokoa sy mahaliana kokoa noho ny hatramin'izay Source .